Archive du 20171229
Ralitera Andrianandraina Potehin’ny fanjakana ny fiainany
Fitoniana, fampihavanam-pirenena ! Aza manonofy an’izany raha mbola izao fitondrana Rajaonarimampianina izao no eo.
Praiministra Mahafaly Hisy fifidianana filoham-pirenena amin’ny 2018
Nanao tomban’ezaky ny zava-bitan’ny governemanta tarihany nandritra ity taona 2017 tetsy amin’ny DLC Anosy, omaly alakamisy 28 desambra ny praiministra Mahafaly Solonandrasana Olivier, raha nanasa ny mpanao gazety niara-nisakafo maraina taminy tao amin’io toerana io.
Mireille Rakotomalala Notendrena ho ambasadaoro any Japon
Taorian’ny ambasadaoro Malagasy voatendry hiasa any Addis Abeba, Etiopia, Alain Tehindrazanarivelo, dia voatendry omaly ny Ambasadaoro Malagasy hiasa any Japon, Mireille Rakotomalala.
Lalàna mifefy ny fifidianana Ny parlemantera no hampitony na hanakorontana eto
Hotanterahina manomboka amin’ny 9 janoary 2018 ny fivoriana tsy ara-potoanan’ny antenimiera roa tonta mba handaniana ireo lalàna mifefy ny fifidianana.
Dr Randriamiarisoa Joseph « Marary i Madagasikara »
Nahitsy ny tenin’ny minisitry ny tontolo iainana sy ny ala tamin’ny tetezamita Dr Randriamiarisoa Joseph raha namintina ny fiainam-pirenena tamin’ity taona 2017 hadiva hivalona ity. « Marary i Madagasikara, malemy ny andrimpanjakana».
Alain Ramaroson Hanao taom-baovao fanindroany eny Antanimora
Tavela ao Antanimora i Alain Ramaroson. Na ireo mpanao politika niara-dia taminy aza mety efa nanadino ny fisiany any am-ponja hatramin’ny fiandohan’ny volana aogositra 2016 nitazomana azy ao noho ny hosoka sy fampiasana hosoka amina taratasin-tany eny Andoharanofotsy sy Ambohimangakely.
Miralenta Mbola marefo ny eto Madagasikara
Mbola lavitrezaka ny asa amin’ny fampanajana ny miralenta eto Madagasikara.
Lakandrano Ankazomanga 20 taona aty aoriana vao nodiovina indray
Lakandrano mirefy 350m mahery izay mamoaka ny rano maloto any Imamba no nodiovin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra nandritra ny roa andro, ny alarobia sy omaly alakamisy 28 desambra,
MAMAFI Namerin-kasina an’Iharanandriana
Anisan’ny mahatonga ny fahorian’ny Malagasy ankehitriny ny fahaverezan’ny fanomezan-kasina an’ireo tendrombohitra 12 nomen’Andrianampoinimerina izany nandritra ny fotoana nanjakany izay nihalefy taorian’ny nanjakan-dRadama I sy tao anatin’ny fanjanahantany.
Ambatondrazaka Miaro tena ireo mpanolotsain’ny tanàna
Hentitra ireo mpanolotsaina ao amin'ny kaominina ambonivohitra Ambatondrazaka raha nitafa tamin'ny mpanao gazety mahakasika ny tsikera mahazo azy ireo.
Kaominina Tanjombato Nijery manokana ireo sahirana sy zokiolona
Nisitraka ny fetin’ny Krismasy am-piravoravoana tahaka ny manodidina azy ireo olona sahirana ara-pivelomana sy zokiolona niisa 500 avy ao amin’ny fokontany 5
HVM Nandray lesona tamin’ny CUA
Manatanteraka asa fanadiovana lakandrano eny La Réunion Kely ny tanora HVM omaly. Misy asa tanamaro manala ny rihi-potaka sy fako, kaohin’ny fiarabe avy ao amin’ny Canal Andriantany, ka olona miisa 500 no manao izany, sandaina 5.000 Ar isan’olona isan’andro.
Mini-Masters Bemiray Nidorehitra mena tetsy amin’ny « paddock » Mahamasina
Notanterahin’ny klioba tsipy kanetibe Bemiray ny fanambiny tamin’ny fanombohan’ny fanatanterahana ny fifaninanana “Mini-Masters Bemiray” etsy amin’ny “Paddock” etsy Mahamasina nanomboka omaly alakamisy 28 desambra 2017.
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Ireo mpitantana Malagasy Samy manana ny fomba sy fisainany avy
Misy amin’ireo mpitantana rafitra fanatanjahantena Malagasy no azo ambara fa nitondra avo koa ny voninahi-pirenena tamin’ny nahalany azy ireo hitantana rafitra aty Afrika na iraisam-pirenena mihitsy.
Ikongo Gadra 13 niverina ao am-ponja
Telo herinandro taorian’ny rotaka, ka nahavaky ny fonjan’Ikongo ny 13 desambra 2017 ary koa nakan’ny fanjakana ireo mpiasan’ny fitsarana tany an-toerana, dia tsy mbola misy mpiambina ny fonja any Ikongo fa miandry fanendrena vaovao.
Ambatondrazaka Manjaka ny halabotry sy ny sinto-mahery
Ireo mpiantsena avy any ambanivohitra sy ireo mpamonjy karaoke harivariva no tena lasibatra amin'izany.
Ambatomaro Voasambotra ilay mpamatsy rongony
Voasambotry ny polisy avy ao amin'ny Boriborintany fahatelo teo am-pivarotana rongony ny alarobia 27 desambra 2017, tokony ho tamin'ny 4 ora hariva i Claudine, 30 taona, monina eny Ambatomaro.
Mpampianatra lasa takalonaina Mitaky 20 tapitrisa Ariary ireo dahalo hamotsorana azy
Lehilahy iray, mpampianatra ao amin’ny EPP Mananosoa Malaimbandy, distrikan’i Mahabo no nalain’ny dahalo an-keriny ny alalrobia alina teo. Mitaky vola 20 tapitrisa Ariary ireo mpaka takalonaina ho tambin’ny famotsorana azy.
Amboavahy-Ambohimanarina Mpanendaka noraisim-potsiny
Lehilahy iray, 31 taona monina eny Amboavahy Ambohimanarina no voasambotry ny polisy avy ao amin'ny Boriborintany fahatelo eny Antaninandro teny an-tranony, ny alarobia teo, noho ny resaka fanendahana.